Dawladda Maraykanka Oo Ammaantay Hindiya Digniina U Dirtay Dalka Shiinaha | Haqabtire News
Dawladda Maraykanka Oo Ammaantay Hindiya Digniina U Dirtay Dalka Shiinaha
(HTN-Washington)-Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in Marayku uu doonayo in uu sii xoojiyo xiriirka uu la leeyahay Hindiya iyadoo uu sare u sii kacoyo galaangalka uu Shiinuhu ku leeyahay Aasiya.
Hindiya ayuu ku tilmaamay “saaxiib” ay wadaagaan “xiriir istaraatiijiyadaysan”, isaga oo intaas ku daray “in aysan marnaba xiriirkaas oo kale la samaysan doonin Shiinaha oo ay ku nool yihiin bulsho aan dimuqraadi ahayn”.
Wuxuu sheegay in Shiinuhu uu mararka qaar ku dhaqmo wax ka baxsan xeerarka caalamiga ah, isaga oo tusaale u soo qaatay muranka badda Koonfurta Shiinaha.
Hadalkiisa ayaa ku soo aaday ka hor booqashada uu toddobaadka soo socda ku tagi doona dalka Hindiya.
Dhanka kalana madaxweyne Donald Trump ayaa booqasho ku tagi doona dalal Aasiya ku yaalla oo uu ka mid yahay Shiinaha bisha Nofembar.
Tillerson oo ka hadlaya xarun cilmibaaris oo caalami ah oo Washington ku taalla ayaa sheegay in ay doonayaan in ay xiriir wax ku ool ah la yeeshaan Shiinaha balse aysan ka soo dabci doonin meesha ay ka taagan yihiin sharciga iyo wax u dhimitaanka uu shiinuhu ku hayo madaxbannaanida dalalka dariska ah iyo wax kaste oo aan u wanaagsanayn Maraykanka iyo dalalka dariska ah.
Tillerson ayaa intaas ku daray in Hindiya aysan wadaagin dimuqraadiyadda oo kali ah balse ay sidoo kalana ka siman yihiin hiigsiga mustaqbalka.